तपाईं असामान्य नयाँ वर्षको छुट्टी मनाउन चाहानुहुन्छ चीन? अब तपाईंसँग त्यस्तो अवसर छ प्ले'न जानु 5-reel, 3-line चिनियाँ नयाँ वर्ष भिडियो स्लट। यो धेरै रोचक र रोमाञ्चक छ कि यो अन्य क्यासिनो भिडीयो स्लॉटको बीचमा तपाईंको मनपर्ने स्लट हुन ठूलो मौका छ। खेलले चीनी क्यालेन्डर र यसको ज्योतिषीय चिन्हहरूको बारेमा कथा बताउँछ। तपाईं रिलेहरूमा जनावरहरूमा तपाईंको पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाहेक, तपाईं बहुमूल्य पुरस्कार जित्न सक्नुहुनेछ, अधिकतम 5000 सिक्काहरू छन्।
बाघ, जस्तै राजा पशुहरूको, जंगली प्रतीक हो। यो बोनस, फ्रिसिन र स्कटर को बाहेक अरू कुनै पनि प्रतीकसँग मेल खान्छ। बोनस खेल विशेषताहरूसँग सम्मानित गर्न तपाईंले3बोनस प्रतीकहरू (चिनियाँ ड्रैगनहरू) पाउनुपर्छ। यो खेलमा तपाईंले 150X लाई पूर्ण शर्तमा जित्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं नि: शुल्क स्पिनहरू सुरू गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईलाई पर्खनुहोस् सम्म सम्म3नि: शुल्क स्पिन संकेतहरू एकचोटि देखा पर्दछ। वैसे, वे बंदर को चित्रहरु द्वारा पेश गरिन्छ।3मोन प्रतीकले पनि 5X लाई पूर्ण शर्त भुक्तान गर्दछ। अतिरिक्त स्केटरको दौडान अतिरिक्त स्क्याटर सुविधा सक्रिय छ, यसको मतलब यो छ कि तपाईंको सबै मानक पेटीबल जीत परिभाषित कुल शर्त द्वारा गुणा गरिन्छ।
पृष्ठभूमि खेलकुद वरिपरि रातो सांपको साथ चिनियाँ शैलीमा डिजाइन गरिएको छ। रातो प्रभुत्व हो। एनीमेशन धेरै सरल छ तर यसले रचनालाई सुन्दर बनाउँछ। तपाईका सुन्दर सुन्दरताहरू जो तपाईलाई सुन्दर बनाउनुहुन्छ। मेलोडीले तपाईंलाई छुट्टीको सम्झना दिलाउँछ, र तपाईं आफ्नो आत्मामा न्यानो लगाउनुहुन्छ। प्रतीकहरू चीनी क्यालेन्डरको ज्योतिषीय संकेतहरू जनावरहरूको चित्र हुन्। तिनीहरूको बारेमा अनौठो कुरा यो हो कि तपाईं रिल्समा मानक कार्ड प्रतीकहरू देख्नुहुने छैन जस्तो कि प्ले'न गो द्वारा अनलाईन निःशुल्क नि: शुल्क स्लॉटमा।
यदि तपाईं स्वतन्त्र नि: शुल्क क्यासिनो स्लॉटको साथ र विदेशी संस्कृतिको बारेमा केहि नयाँ पत्ता लगाउन चाहानुहुन्छ भने, निःशुल्क बोनस एक्स्प्रेसमा अनलाइन अनलाइन नयाँ वर्ष स्लॉट खेल्नुहोस्! यो तपाईंको मौका हो, आफ्नो भाग्य प्रयास गर्न डरो नगर्नुहोस्!
???? € 270 मुफ्त चिप कैसीनो
💵 पाउन्ड 4800 जम्मा जम्मा कैसीनो बोनस छैन
💵 40% क्यासिनो म्याच बोनस
💵 € 60 अनलाइन कैसीनो टूर्नामेंट
💵 820% जम्मा जमा बोनस
💵 520% जम्मा मिलान बोनस
💵 950% कैसीनोमा मिलान
💵 285 नि: शुल्क स्पिन कुनै जम्मा छैन
💵 970% पहिलो जम्मा बोनस
💵 $ 815 फ्री कैसीनो टूर्नामेंट
💵 130 फ्री कैसीनो स्पिन
💵 यूरो 1885 कुनै जम्मा बोनस कैसीनो छैन
💵 $ 4930 कुनै जम्मा बोनस कैसीनो छैन
💵 यूरो 2730 जम्मा छैन
💵 € 565 अनलाइन कैसीनो टूर्नामेंट
💵 $ 2065 जम्मा छैन
💵 यूरो 660 डेली फ्रीरोल स्लट टूर्नामेंट
💵 111 फ्री स्पिन कुनै जम्मा कैसीनो छैन
💵 यूरो 3425 जम्मा बोनस कोड छैन
💵 135% उत्तम साइनअप बोनस कैसीनो
💵 285% साइन अप कैसीनो बोनस
💵 $ 510 मुक्त क्यासिनो चिप
💵 750% म्याच बोनस क्यासिनो
💵 EURO 645 नि: शुल्क क्यासिनो चिप
💵 $ 4995 कुनै जम्मा कैसीनो बोनस
💵 $ 140 नि: शुल्क चिप क्यासिनो
💵 यूरो 295 नि: शुल्क पैसा
💵 $ 222 मोबाइल फ्रीरोल स्लट टूर्नामेंट
💵 $ 2550 NO DEPOSIT BONUS CODE
💵 € 666 टूर्नामेंट
💵 £ 710 जम्मा कैसीनो बोनस छैन
💵 280% क्यासिनो म्याच बोनस
💵 EUR 505 FREE कैसीनो चिप
💵 $ 510 फ्री कैसीनो टिकट
💵 $ 975 जम्मा छैन
💵 33 मुक्त स्पिन क्यासिनो
💵 $ 500 नि: शुल्क नगद
💵 € 455 मुफ्त कैसीनो चिप
💵 $ 490 कैसीनो टूर्नामेंट freeroll
💵 $ 65 फ्री कैसीनो टिकट
💵 € 170 टूर्नामेंट
💵 EUR 210 डेली फ्रीरोल स्लट टूर्नामेंट
💵 € 4220 जम्मा बोनस कैसीनो छैन
💵 $ 2840 जम्मा बोनस कोड छैन
💵 $ 285 कैसीनो टूर्नामेंट freeroll
💵 190% कुनै नियम बोनस!
💵 पाउन्ड 270 अनलाइन क्यासिनो टूर्नामेंट
💵 यूरो 1220 जम्मा रकम बोनस कोड छैन
💵 EUR 3565 जम्मा बोनस कोड छैन
💵 यूरो 700 मुक्त क्यासिनो चिप
💵 EUR 1111 कुनै जम्मा बोनस कोड छैन
💵 135 नि: शुल्क छुट्याइएको छैन
💵 यूरो 485 NO DEPOSIT CASINO बोनस
चीनियाँ नयाँ वर्ष अपडेट गरिएको: जनवरी 21, 2019 लेखक: आमिर Berrey
1 चीनियाँ नयाँ वर्ष
3.0.0.0.1 ब्ल्याक जैक अटलांटिक सिटी
3.0.0.0.2 रील भीड
3.0.0.0.3 भित्री उन्माद
3.0.0.0.4 एजेन्ट जेन गोरा
3.0.0.0.5 वाइकिंग क्वेस्ट
3.0.0.0.6 Jingle घंटी
3.0.0.0.7 प्रेम म्याच खरिद
3.0.0.0.8 अनैतिकताका लागि पिरामिड क्वेस्ट
3.0.0.0.9 देवताहरूको युद्ध
3.0.0.0.10 डबल डबल बोनस पोकर
3.0.0.0.11 हीरा जंगली
3.0.0.0.13 वेगास पट्टी कालीजैक
3.0.0.0.14 X-men 50 रेखा
3.0.0.0.15 रक स्कूटर
3.0.0.0.17 फुटबल नियमहरू
3.0.0.0.18 बोनस पोकर डिलक्स
3.0.0.0.19 भाग्यशाली खरगोश लूट
3.0.0.0.20 Nrvna - nxt अनुभव
3.0.0.0.21 बार7को
3.0.0.0.23 हला रातहरु
3.0.0.0.24 सुपर एकाधिकार पैसा